Isipikha Esihlakaniphile Sivuka: isikhulumi se-alamu esine-Alexa | Izindaba zamagajethi
I-Energy Sistema inikeza iSomlomo Esivumayo, isipikha se-alamu esine-Alexa
U-Eder Esteban | | Izipikha, Isithombe nomsindo
Okokugcina kwemikhiqizo i-Energy Sistem esishiya ku-IFA 2019 kungenzeka kube yinto entsha noma emangazayo kunayo yonke. Le nkampani yethula iSpikha Esivumayo, eyisipikha se-alamu, eza ne-Alexa edidiyelwe njengomsizi. Umkhiqizo ohlala ngaphakathi kwesigaba sokulalelwayo, noma kunjalo kulokhu usebenzisa okuningi okuhlukile.
Le modeli yethulwa ukuqedela uhla olukhulayo lwezikhulumi zefemu. Ngaphezu kwalokho, i-Smart Speaker Wake Up yisipika sokuqala esihlakaniphile ukwenza yethulwa emakethe esebenzisa umsebenzi we-alamu yomsakazo futhi inesikrini esikhulu. Umkhiqizo i-Energy Sistem efuna ukumangaza ngawo abasebenzisi.
Isipikha Esihlakaniphile Sivuke kwethulwa ukuqedela uhla lomkhiqizo. Kuyisibonelo esinakho konke okudingayo ukuqala usuku ngendlela emnandi kakhulu futhi eyenziwe yaba ngeyakho. Le divayisi inobuchwepheshe be-multiroom nezinketho zokudlala ezihlukile ezihambisana ne-Spotify ne-Airplay yokuphelezela umsebenzisi ngomculo abawuthandayo usuku lonke.
Ngaphezu kokufaka umsizi we-Alexa, unezikhulumi ezinobuchwepheshe beBluetooth 5.0 nohlelo lwayo olunamagumbi amaningi lokulalela umculo ngaphandle kwentambo noma kunini lapho ufuna khona. Inikeza umsindo wesitiriyo esingu-2.0 no-10 W wamandla ngohlelo lwe-bass enhancement, ngokusebenzisa ulwelwesi oluphindaphindiwe oluzokwenza umsebenzisi ajabulele umsindo ocacile nophakeme. I-Energy Sistem nayo yethula ishaja engenantambo iyahambisana nezinga le-Qi.
Isipikha Esihlakaniphile Sivuke futhi imbobo eyodwa yokushaja ye-USB nokufaka komsindo okusizayo okukodwa ngo-3,5mm minijack, ukuxhuma noma iyiphi enye idivayisi. Zonke lezi zinketho nazo ziyalungiswa kumodi yewashi le-alamu. Iphinde ihlanganise isikrini esikhulu sokubukwa okuhle kuzo zonke izimo zokukhanya futhi inikeze ithuba lokulawula amandla ayo.
Lesi sipikha se-alamu sikuvumela ukuba uhlele ama-alamu amabili ngokuzimela. Isibonelo, isekela eyodwa yezinsuku zesonto neyodwa yangempelasonto. Ngaphezu kwalokho, inomsebenzi wokubambezeleka futhi isnuza njalo imizuzu engu-10. Ngaphandle kokungabaza, umkhiqizo omangalisayo ovela kwa-Energy Sistem.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Isithombe nomsindo » I-Energy Sistema inikeza iSomlomo Esivumayo, isipikha se-alamu esine-Alexa
UFossil wethula ama-smartwatches amasha nge-Wear OS e-IFA 2019
I-Energy Sistem yethula izikhulumi zayo ezahlukahlukene